KALFADHIGA 66-AAD: FIFA oo soo bandhigtay sharciyo cusub, kuwo la bedeley & kuwo la tuuray! – Gool FM
KALFADHIGA 66-AAD: FIFA oo soo bandhigtay sharciyo cusub, kuwo la bedeley & kuwo la tuuray!
Raage May 13, 2016
(Mexico City) 13 Maajo 2016 – Boodhka caalamiga ah ee dejiya shuruucda kubadda cagta ee International Football Association Board ama IFAB oo ah heey’ad ay FIFA xubin ka tahay ayaa wax ka bedeley sharciyo dhoowr ah iyagoo sidoo kale kuwa kalena ka doodaya, kuwo cusubna soo kordhiyey.
Xeerarka ay bedeleen waxaa ugu wayn sida maanta lagu sheegay kalfadhiga 66-aad ee FIFA xeerkii 12-aad oo sidoo kale loo yaqaanno ciqaab seddexan, kaasoo ah in markii laacib si sharci darro ah loogu legdo diilinta 18-aad in kooxda khaladka gashay ay wajahdo 3 ciqaabood; rigoore laga dhigo, laacibkii khaladka galay oo rooso loo taago iyo isagoo kulan maqnaada, haatan 3-daas midkood baa la tuuri doonaa iyadoo xitaa doodda ay ku jirto inay kooxdu kala dooran karto rigoore laga dhigo ama laacibka oo rooso laga siiyo. Wuxuuna qodobkani geli doonaa tijaabo 2 sanadood ah kaasoo ka bilaabmaya 1-da bisha Juun ee soo aaddan.
Qodobbada kale ee cusub waxaa ka mid ah: Inay garsoorayaashu isticmaalaan ku celisyo duuban kahor inta aysan go’aanka gaarin, waxaana mashruucan oo ay ka qayb qaadan doonaan ilaa 20 tartan iyo horyaal si tijaabo ah oo LIVE ah loo bilaabi doonaa ugu dambayn 2017.
Daawo: Luka Modric oo dhulka dhigay Cristiano Ronaldo! Ma ula kacay mise waa kam'a?
TOOS u daawo: Kalfadhiga 66-aad ee FIFA - LIVE